अन्तर्वार्ता : पार्टीको काम निष्ठापूर्वक गरी आएको छु, यसपालि महामन्त्री उठ्छु : सहमहामन्त्री डा. महत - khabarpatro
१९, मंसिर २०७८
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर। डा. प्रकाशशरण महत नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री हुन् । उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो कार्यकाल सहमहामन्त्री छन् । संविधानसभा सदस्य उनले संविधान निर्माण मस्यौदा कार्यदलको सदस्यका रूपमा पनि काम गरेका छन् । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । आफ्नो पार्टी तथा सार्वजनिकरूपमा समसामयिक एवं राजनीतिक विचारहरू राख्नसक्ने स्पष्ट वक्ताका रूपमा डा महत परिचित छन् । नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उठ्ने घोषणा गरेका डा महतसँग महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेरो अनुभव र दक्षताअनुरुप पार्टीलाई आधुनिकतामा परिणत गर्न म प्रयत्नरत रहनेछु । जहाँसम्म यहाँले प्रश्न गर्नुभयो डा महतलाई किन मत दिने भनेर, यसको म जवाफ दिन चाहन्छु । जस्तो कि म प्रतिबन्धितकालदेखि नै नेपाली नेपाली कांग्रेसमा लागेर काम गरिरहेको छु । मैले विद्यार्थीकाल त के स्कुले जीवनदेखि नै मैले नेविसङ्घमा लागेर काम गरेको छु । मैले जेलनेल भोगेको छु । मैले आजदेखि होइन नि २०२९ सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि लिएर २०६२–६३ को आन्दोलनसम्म कांग्रेसको पक्षमा लागेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छु । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि केही समय बाहिर अध्ययनमा गएको समयबाहेक अरु सबै समय सक्रियरूपमा पार्टीमै लागेको छु । म सरकारमा रहँदा होस् या पार्टीमा पनि जे–जस्तो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेँ त्यो पनि उच्च समर्पणका साथ पूरा गरेको छु । इमानका साथ मेरो सम्पूर्ण क्षमता र प्रयोग गरेर पार्टीले मलाई सरकारमा होस् या पार्टीमा दिएको काम इमान्दारिताका साथ पूरा गरेको छु । म दुईपटक परराष्ट्र मन्त्रालयलको जिम्मेवारी सम्हाल्दा होस् या ऊर्जामन्त्री हुँदा पनि मैले पार्टीको इज्जत राखेर काम गरेको छु । संविधान निर्माणको मस्यौदा समितिमा रहँदा पनि मैले सक्रिय र सिर्जनात्मकरूपमा आफ्नो योग्यताको प्रयोग गरेको छु । अनि पार्टीमा केन्द्रीय सदस्यका रूपमा होस् या महामन्त्री रहँदा होस् देश र पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेको छु ।
जस्तो कि पार्टीले मलाई जिम्मा दियो, नेविसङ्घको अघिल्लो कार्यकालको अधिवेशन गराएँ । जुन बडो कठिन अवस्था थियो, तर मैले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गरेँ, अधिवेशन सम्पन्न गराएँ । पार्टीले कोभिडको समयमा पनि मेरो संयोजकत्वमा कोरोना समिति गठन ग¥यो र काम लगायो । मैले कोभिड महामारी भनिन । हिमालदेखि तराईसम्म पुगेँ र अनुगमन गरेँ, काम गरेँ र पार्टी र सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाएँ । त्यसैगरी सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी जुन दिइएको थियो, त्यसप्रति पनि मैले न्याय गरेको छु । यस पदको जे–जस्तो गरिमा र जिम्मेवारी हो त्यो मैले कुशलतापूर्वक बहन गरेकै छु ।
नेपाली कांग्रेस संसारकै एक उत्कृष्ट र प्रजातान्त्रिक विचार भएको पार्टी हो । यसले देश, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रका पक्षमा धेरै काम गरेको छ । तर तपाईँले देख्नुभएको छ नि कम्युनिष्टहरूले आफूहरूले मात्र काम गरेको जस्तो गरी प्रचार गरिरहेका छन् । वर्तमान संविधान नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा निर्माण भएको होइन रु त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हाम्रा पार्टी सभापतिले नै पहिला स्थानीय र लगत्तै संसद्को निर्वाचन गराउनुभएको होइन रु यही संविधान र हामीले नै गरेको पछिल्लो निर्वाचनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको होइन रु तर अहिले हेर्नोस् त कम्युनिष्टहरूले सबै आफैँले गरेजस्तो गरेर प्रचार गरेका छन् । वर्तमान संविधानमा महिला, मधेशी, विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जनजाति आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हामीले गरेको होइन रु यी त पछिल्ला एकाध उदाहरण मात्र दिएँ यहाँलाई । यसबाहेक हामीले गरेका धेरै काम छन् यो देश र नेपाली जनताका पक्षमा । तर तिनको हामीले प्रचार गरेका छैनौँ, तर कम्युनिष्टहरूले आफूले गरेको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । त्यसैले अब मैले भनेको छु कि पार्टीमा प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनु जरुरी देखियो । हामीले काम गरेकै छौँ, जनताले थाहा पाएकै छन् नि भन्यौँ हामीले । तर अहिले जमाना फेरियो, सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मा¥यो । त्यसैले अब हामीले पनि आफूले गरेका कामको प्रचारै गर्ने त होइन तर जनतालाई थाहा दिनुपर्ने अवस्था देखियो । म महामन्त्री भएपछि त्यो कामको प्रणाली बसाल्छु । यो प्रणालीलाई नेतृत्व तहदेखि कार्यकर्ता तहसम्म सञ्चार गर्नु जरुरी छ ।
नेपाली कांग्रेसका हरेक नेता कार्यकर्तालाई हामीले काम पाइएन भन्ने नबनाउन हरेक विभागहरू गठन गर्ने, प्रशिक्षण गाउँगाउँसम्म पु¥याउने । अहिले ठूलो युवापङ्क्ति पार्टीमा जोडिएको छ उनीहरूलाई सङ्गठन निर्माणमा पूर्णरूपमा लगाउने । यसले नेपाली जनताले कम्युनिष्टको कुशासन र बेथिति जुन जनताले देखेका छन् त्यसको पनि भण्डफोर गर्ने । नेपाली कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हामीले पार्टीलाई पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि हामीले अबका सबै चुनावहरूमा कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्छ । त्यही ढङ्गबाट अब पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले पार्टीले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा निर्वाचनको एक प्रकारको तरङ्ग आएको छ, यसलाई अबका निर्वाचनहरूसम्म नै पु¥याउनुपर्छ र अब आउने सबै निर्वाचनहरूमा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यी सबै कामलाई महामन्त्रीजस्तो पार्टीको सक्रिय पदाधिकारीमा रहेर मैले अगाडि बढाउने छु ।
नेपालप्रति हाम्रा मित्र तथा शक्ति रष्ट्रहरूको ठूलो सद्भाव छ । तर पनि यसको फाइदा हामीले लिन सकेका छैनौँ । हाम्रो यस्तो प्रवृत्ति छ कि राष्ट्रवादका ठूला कुरा जनतातर्फ फर्केर गर्ने र नारा लगाउने तर सम्बन्धित ठाउँमा भने राख्न नसक्ने । यसैले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पनि पूरा गर्न सकिरहेका छैनौँ र उता हाम्रा मित्र रष्ट्रहरूको सद्भाव प्राप्त गर्न पनि सकेक छैनौँ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदा या यहाँले भनेजस्तै पछिल्लो पटक भारतको भ्रमण गर्दा पनि यी पक्षहरूलाई थप स्पष्ट पार्ने काम मैले गरेको छु । रासस
प्रकाशित मिति :मंसिर १९, २०७८ आइतवार - १३:१०:५४ बजे